WOWOW Pot filler Faucet Hot na rano mangatsiaka
Home / Fitaovana an-dakozia / Faucets lakozia ao an-dakozia / WOWOW Faucet Filler Black Pot ho an'ny fauxet lakozia mafana sy mafana
WOWOW Pavarom-borona mainty mangatsiaka Fangcet ho an'ny mafana sy ny hatsiaka Fandroana an-dakozia Faucet
Paiso matihanina matihanina, wowowfaucet manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana mpanefy tanona, baiko izao!
2311400D torolàlana fametrahana
2 mitazona ny rindrina fofon'aina fametahana rindrina faucet 2311400D dia mafana sy mangatsiaka, misy fihodinana sy famoahana maimaimpoana 360 °. Rehefa tsy ampiasaina dia afaka mivalona amin'ny rindrina izy io mba hamonjy toerana.
Sady mitarika mahasalama, be mpibontsina tsara, fametrahana maro sosona, rano manalefaka, porofo porofona
Faucet famenoana vilany roa mangatsiaka sy mafana; elanelam-potoana: 5.9 ″; halavany: 13.1 ″; mpampitohy mahazatra antsika: 1/2 ″ nps mankany 1/2 ″ npt
Ny firafitra maimaim-poana mitarika: varahina miorim-bolo manana vovo-tarehy mamirapiratra, ny fahalavoana tsirairay izay mandalo ny mpanefy vodiny dia voajanahary sy salama, tsy misy zavatra manimba
Toerana azo itokisana: ny roa mitantana ny rindrina miorim-bolo miforitra miakatra toerana sy habaka kely, ny rantsan-droa misy an'io gropy io ary ny 360 degre spout spinning dia mahazo tombony bebe kokoa
Black coating: faucet an-dakozia amin'ny fisehoana mahazatra sy ambany dia azo ampifangaroina miaraka amin'ny kofehinao ankehitriny, tandindon'ny hakantony sy azo ampiharina, tonga lafatra toy ny paompy ara-barotra, fantsom-pisakafoanana ao an-dakozia
SKU: 2311400D Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Faucets lakozia ao an-dakozia Tags: Black Pot, Fangaro mifangaro, fatana
19.8 X 7.9 X 5 santimetatra
G *** YJolay 29, 2020
Napetrako tsotra izao tamin'ity faran'ny herinandro ity. Nividy ilay iray izay manana hookup mafana sy mafana tsirairay aho.
Hatramin'izao… .mety tsara izany! Tsy dia nanelingelina loatra ny fananganana ary hita fa tena matanjaka!
Tena napetrako tao anaty fitoeram-bokin'ny kaniniko io mba hahamora kokoa ny famenoana ireo fitoeran-drano kaninina ho enti-mameno ny siny fonosinay. Te hanana rano mangatsiaka ho an'ny trondro aho ary handoro rano ho an'ny siny.
Tena niasa mafy izany! Napetrako teo amin'ny 24 santimetatra teo amin'ny tany izany ary tena nety ilay izy! Tsy misy rano misintona fanampiny avy any an-dakozia! Manitatra eo amin'ny 2 ft izany ka mahatonga azy ho tsotra ny mameno karazan-kaontenera rehetra. Ankoatr'izay, ny sandany dia tsara raha ampitahaina amin'ny paompy famenoana vilany isan-karazany! Mety hanamora ny fiainantsika izany ary toa tena tsara ary mety hatanjaka tokoa! Manolotra sosokevitra amin'ny olona aho ary hividy indray mandeha indray!